Uhie okpu weputara Project Quay, ndekọ aha maka iwu ma kesaa onyonyo akpa | Site na Linux
Uhie okpu weputara Project Quay, ndekọ aha maka iwu ma kesaa onyonyo akpa
Red Hat Quay bụ ndekọ onwe nzuzo nke CoreOS Inc. mepụtara. ejiri ya iji chekwaa, wuo ma tinye ihe oyiyi, na mejupụtara usoro ọba akwụkwọ, usoro ngwaọrụ, na ndị ọzọ na nyiwe nhazi nke ngwa kwesịrị iji na-agba ọsọ na a akpati ikpo okwu.
Mgbe oru ngo ahụ dabara na Red Hat, a malitere ya dịka akụkụ nke ụzọ iji nyefe gaa na otu ihe ngwanrọ na-emeghe patented ngwaahịa si enwetara ụlọ ọrụ. Koodu a na-ajụ ike ma Red Hat Quay na Quay.IO, ma gụnyekwa Clair oghere ọrụ nchedo emeghe nke ndị otu Quay mepụtara ma jikọta ya na ndekọ na 2015.
Na blọọgụ na-ekwupụta mgbanwe nke ọrụ a na-emeghe, isi ihe ngwanrọ na-eduga Red Hat Joey Schorr dere, sị:
"Anyị kwenyere na ọnụ ọrụ ahụ ga-erite uru nke igwe ojii-ndị obodo na-ebelata ihe mgbochi na ihe ọhụrụ gburugburu arịa, na-enyere aka ịmekwu igbe nchekwa na ịnweta."
Emepụtara Clair na mpaghara oghere oghere iji meziwanye nchekwa site na ọrụ emeghe n'etiti ndị na-ere ahịa na ndị ọrụ, "ka ọ gara n'ihu. "Site na mkpa nchekwa na-arịwanye elu n'uche, Clair na-etinyekwa aka na Project Quay."
Banyere Quay Code
Ugbu a ọ ghọrọ oghere dị ka akụkụ nke Project Quay, Quay na ntọala Clair ga enyere obodo aka nwa afọ site na ígwé ojii iji belata ihe mgbochi na ihe ọhụrụ gburugburu akpa, na-enyere ha aka ime ka arịa dị nchebe ma nwekwaa ike ịnweta.
Ọrụ ahụ na-enye ngwaọrụ ichikota, chekwaa ma kesaa onyonyo akpa na ngwa, yana a web-based interface iji jikwaa ndekọ.
Site na Quay, ịnwere ike idowe igbe nke gị ma ọ bụ ndekọ onyonyo ngwa gị na akụrụngwa a na-achịkwa, na-achọ naanị ịnweta DBMS na ohere diski iji chekwaa onyonyo.
Ọzọkwa ga - enyere ndị ọrụ aka inweta nchedo gbasara nchekwa ihe oyiyi ha site na akpaaka, nyocha na ikike. Ọ na-akwado ọtụtụ gburugburu akpa na orchestration nyiwe na dịkwa dị ka a kwadoro ma ọ bụ ọrụ mpaghara.
The ndekọ bụ dakọtara na mbụ na nke abụọ version nke protocol (Docker Ihe ndekọ HTTP API) na-ekesa ihe oyiyi akpa maka engine Docker, yana yana nkọwapụta faịlụ Docker gosipụtara.
Ngwa Ihe Ngosi Ihe Ngosiputa Ngwa na-akwado nchọpụta akpa. O kwere omume ijikọ na sistemụ nke nnyefe yana mwekota na-aga n'ihu (CD / CI) yana nzukọ si na nchekwa sitere na GitHub, Bitbucket, GitLab na Git.
ebe ugbommiri na-ekedo na-enye usoro nnweta nnabata na-agbanwe agbanwe, njikwa maka otu mmepe ma nye ohere iji LDAP, Keystone, OIDC, Google Auth, na GitHub maka nyocha.
Enwere ike itinye nchekwa na mpaghara mpaghara FS, S3, GCS, Swift, na Ceph na emeghari iji bulie nloghachi nke data dabere na ebe onye ọrụ. Ihe mejupụtara gụnyere Clair Toolkit, nke na-enye nyocha akpaka nke akpa jupụtara iji chọpụta adịghị ike a na-edozighi.
Red Hat kwughachiri na nkwado ya maka Quay mere atụmatụ ilekwasị anya na imeziwanye "onye ọrụ na ahụmịhe nke ụbọchị ahụ."
Mmelite e mere atụmatụ na-agụnye mbipute akpaka nke oghere aha, nchekwa, ma ọ bụ mpaghara nke ndị gafere ọtụtụ ihe ndekọ. Nkwado emelitere maka nchekwa nchekwa na nkwalite njikwa ọchịchị ọdịnaya dịkwa na ndepụta ịme ihe.
Qulọ ọrụ Quay nwere mkpokọta ngwanrọ mepere emepe edere na Python Ikike n'okpuru Apache 2.0 na ikikere ndị ọzọ na-emepe emepe, yana ịgbaso usoro nchịkwa gọọmentị mepere emepe, yana kọmitii ndozi yana obodo mepere emepe, ndị ọrụ Red Hat Quay na ndị ọrụ Quay.io nwere ike irite uru site na inwe ike ịrụkọ ọrụ ọnụ na koodu ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Uhie okpu weputara Project Quay, ndekọ aha maka iwu ma kesaa onyonyo akpa
Nnyocha Nchọgharị Google Search: Won! Ihe nyocha 10 kachasị mma nke 2019
Facebook ga - ajụ ndị ọrụ ya ka ha nyochaa vidiyo profaịlụ ha na vidiyo selfie